एसएलसीमा विद्यार्थीहरुले लेखेका उत्तरहरु,मर्ने धम्कीदेखि कवितासम्म ! - Himalayan Kangaroo
एसएलसीमा विद्यार्थीहरुले लेखेका उत्तरहरु,मर्ने धम्कीदेखि कवितासम्म !
Posted by Himalayan Kangaroo | २ असार २०७३, बिहीबार ०३:२९ |
काठमाडौं । गत वर्षको एसएलसी परीक्षाको नतिजा विहीवार सार्वजनिक हुँदैछ । यो वर्षदेखि ८२ वर्षको एसएलसी इतिहासमा पहिलोपटक ग्रडिङ प्रणालीको आधारमा नतिजा सार्वजनिक हुन लागेको हो । यो प्रणाली अनुसार कुनै पनि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहुने भनिए पनि डी भन्दा तलाको ग्रेड पाउँनेले कक्षा ११ पढ्न नपाउँने भएकोले फेल सरह नै हुनेछ ।
एसएलसीलाई नेपाली समाजमा निकै महत्व दिइन्छ । त्यसैले एसएलसी परीक्षाका बेला विद्यार्थी मात्र होइन अभिभावहरु पनि निकै तनाव र दबाबमा रहन्छन् । अझ उत्तर पुस्तिका चेक गर्ने शिक्षकहरुको अवस्था कस्तो हुँदो होला ? यो धेरैले जान्न चाहेको कुरा हो । वर्षेनी लाखौं विद्यार्थी सहभागी हुने एलएलसी परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरुको सोंच र प्रस्तुति एउटै हुन्छन् भन्ने छैन । कतिसम्म भने परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा कापी जाँचकी सर,म्याडमहरुको नाममा याचनापत्र,प्रेमपत्र र कविता मुक्तक लेखेर पठाउँने विद्यार्थीहरु पनि धेरै हुने गरेका छन् ।
एसएलसी परीक्षामा विद्यार्थीहरुले लेखेका त्यस्ता याचनापत्र,प्रेमपत्र र कविता मुक्तकको स्क्रिन शट हामीलाई प्राप्त भएको छ । जुन यसप्रकार छन् :
यसपटक फेल भए विहे गरिदिन्छन् :
आफूलाई नेपालगञ्जको प्रशंसा मल्ल उल्लेख गर्नेले आफूलाई केही लेख्न नआउँने पत्र लेखेकी छिन् । उनले आफू पोहोर साल पनि एसएलसीमा फेल भएको उल्ल्ेख गरेकी छिन् । यसपटक पनि आफू फेल भए घरबाट निकालिदिने वा विवाह गरेर पठाइदिने धम्की आएको बताएकी छिन् । आफूलाई अहिले नै विवाह गर्ने मन नभएको प्रष्ट पार्दै उनले आफूले गत वर्ष पनि विष सेवन गरेर मर्ने योजना बनाएको लेखेकी छिन् । त्यसैले यसपटक आफ्नो इज्जत राखिदिन उनले उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने सर,म्याडमलाई अनुरोध गरेकी छिन् ।
यो विषय तपाई हेरिदिनुहोस् बाँकी विषय म हेर्छु :
आफूलाई कमजोर विद्यार्थी बताउँने एकजनाले आफू दिमागी रोगको विरामी भएको लेखेका छन् । त्यसैले आफ्नै छोरा सम्झेर पास गरिदिन याचना गरेका छन् । उनले लेखेका छन्–तपाईले यो विषय हेरिदिनुहोस्,अरु विषय म हेर्छु ।
श्रीमानले हेला गर्छन् :
आफूलाई विवाहित महिला बताउँने एकजना विद्यार्थीले यसपटक पनि फेल भए श्रीमानको हेलामा बस्नुपर्ने भएकोले जसरी पनि पास गराइदिन लेखेकी छिन् । आफूमाथि पारिवारिक हिंसा भैरहेको बताउँदै उनले एसएलसीमा पास भए जीवनमा अघि बढ्न सक्ने थिएँ भन्ने लेखेकी छिन् ।
कवितामय उत्तर :
एकजना विद्यार्थीले त बेढंगको उत्ताउलो उत्तर लेखेर छोडेका छन् । आइलभ यू सानु भन्दै कुनै सानु नामक प्रेमिकालाई सम्बोधन गर्दै उनले लेखेको कविता यस्तो छ :
तिमी फूल बन प्रिय
म हाँगा बनिदिन्छु
तिमी भैंसी बन तिमी
म राँगा बनिदिन्छु ।
अँग्रेजी पण्डितको सन्देश :
एकजना विद्यार्थीले आफ्नो अँग्रेजी पण्डित्याइँ उल्लेख गरि धुम्रपान र मद्यपान सम्बन्धी सन्देश छोडेका छन् । जुन पढ्दा हाँस्य भिटामिन प्राप्त हुन्छ ।
Previousराजधानीमा अब ‘मोबाइल प्रहरी बिट’
Nextगाईका लागि एक छुट्टै मन्त्रालय बनाउन माग
४ जेष्ठ २०७४, बिहीबार ०२:१४
यूकेमा एक विश्वविद्यालय सहित ५७ कलेज निलम्बनमाा
११ असार २०७१, बुधबार २३:११
खाडीमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य जोखिममा
६ जेष्ठ २०७३, बिहीबार ०१:००
विश्वकप : इञ्जुरी टाइममा हिरोइक खेल प्रदर्शन गर्दै ब्राजिल विजयी